ငါတို့မှာရှိတဲ့မိတ္တူတစ်စောင်ရဖို့နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုရတယ် Lego Star Wars: Mandalorian 74-Z Speeder စက်ဘီးသည်ငါတို့၏နောက်ဆုံးပေါ်ဆုဆွတ်ခူးရာတွင်ထုတ်ပေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည် 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder.
အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က Lego Star Wars set ကိုသြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်လွှတ်တင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ် - အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောမော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်၎င်းသည်မီးခိုးရောင်သေတ္တာတစ်ခုသာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းမှာမရှိသည့်အရာတစ်ခုမှာ Scout Trooper ပါသောစက်တပ်စက်ဘီးဖြစ်သည်။
သောကြောင့်ဖြစ်သည် Lego အုပ်စုသည်မန်ဒယ်လာရီယန်၏ဒုတိယရာသီအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအဖြစ်အပျက်နှစ်ခုကိုစုစည်းထားပြီးအခန်း ၁၂ - Siege ၏တပ်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (နှင့် Greef Karga) ကိုယူပြီးအခန်း ၁၄ - အဖြစ်ဆိုး၏ပုံမှန် Stormtroopers နှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ Artillery Stormtrooper ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုံးစံဖြစ်သော 74-Z Speeder Bike တွင် Siege ၏လိုက်လံမှုကိုပြန်လည်ထိရောက်စွာပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရန်အဖြေရရှိသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုပေါ်တွင်ကစားခြင်းကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်တည်ဆောက်မှုကိုသင်ပိုမိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၊ p ကိုတွေ့လိမ့်မည်artကျွန်တော်တို့ရဲ့အပတ်စဉ်သတင်းလွှာ၏အောက်ခြေတွင်စာရင်း။
သင်သည်ဤသတင်းလွှာတွင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်၊ ဤစာမျက်နှာ၏ညာဘက်ရှိပုံစံကိုဖြည့်ခြင်း (သို့မဟုတ်လက်ကိုင်ဖုန်းရှိပါကအောက်ခြေသို့ scroll လုပ်ခြင်း) ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပြန်လာတော့သင့်ကိုပုံမှန်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ် Lego သင်ဖတ်လိုသောအကြောင်းအရာများ၊ သတင်းများ၊ သုံးသပ်ချက်များနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိုးထွင်းသိမြင်မှုများအားလုံးသည်အဖွဲ့တစ်ခုမှရေးသည်။ သငျသညျအခြို့သောအလေးအနက်ထားအေးမြအနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူပါလိမ့်မယ် Lego သင်၏ 74-Z Speeder စက်ဘီးနှင့် Scout Trooper အသေးစား * သင်၏ကိုယ်ပိုင်မိတ္တူအပါအဝင်ဆုများ။
ဆိုင်းအင်လုပ်ပါ အင်္ဂလန်မွန်းတည့်ချိန်သြဂုတ်လ ၂ ရက် ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ဆုမဲဆွဲရန် Scout Trooper minifigure ဖြင့်ပြည့်စုံသောမော်ဒယ်မိတ္တူတစ်ခုရရှိပါ။။ ဤပေးကမ်းမှုသည်လက်မှတ်ထိုးထားသူများအတွက်သာဖြစ်သည် Brick Fanatics လက်ရှိသို့မဟုတ်အားဖြင့်သတင်းလွှာ အင်္ဂလန်မွန်းတည့်ချိန်သြဂုတ်လ ၂ ရက်. ဤသည်မဲနှိုက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း, သတင်းလွှာစာရင်းသွင်းသူအားလုံးကိုဖွင့်သည်။
* အနိုင်ရသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကြိုက် Speeder Bike plus ၏မိတ္တူတစ်စောင်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် ဒီသေးသေးလေး အထက်ပါပုံနှင့်ဗွီဒီယိုတွင်ပါ ၀ င်သောစိတ်ကြိုက်ပုံစံထက် (Scout Trooper ၏တရားဝင်ဗားရှင်းကိုအစုံလိုက်တွင်တွေ့နိုင်သည်) ။
← LEGO သည် SDCC 2021 အတွက်အသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ဖေါ်ခဲ့ပါသလား။
Lego Star Wars Republic Gunship LEGO ကိုဒီဇိုင်နာများကတုံ့ပြန်ကြသည် Ideas မဲပေးပှဲ →